Sonke sizama ukulungeleka, ukuthakazelisa, umdlalo. Ndiyicinga ukuba wonke umntu unokuthiwa ngu-5-10 izambatho zengubo. Yaye yeyiphi iingubo zokugqoka zikhona? Zingaphi zazo zikhona kwaye ziziphi iimpawu zabo ezichazayo? Masizame ukuqonda.
Le ndlela ingachazwa njengento yokudibanisa ama-eras kunye neenkcubeko. Khawucinge ngomhlali wemizi kwidolophana, okanye i-rustic kwisixeko. Abameli beli gama basoloko bevela kwisihlwele.
Abantu abakhetha le ndlela yokugqoka banamhlanje, kodwa balethe iingubo zemihla ngemihla yeengubo zikazwelonke.
Le ndlela ingachazwa njengesebe lesimboli okanye ilizwe.
Oku kunye nesitayela akubizwa ngokukodwa. Ngokuqhelekileyo, ezi ziingubo esizibeka kuzo ukuphumla umoya okanye ukusebenzela emadini.
Abasunguli bale ndlela yokugqoka bangamaKoloniyali angamaNgesi. Iimpawu zobume be-Safari zincinci zincinci, ukhetho lwezambatho zetekisi ezikhanyayo kunye neepokotshi ezininzi, ngokubhekiselele. Izixhobo ziyimfuneko kubume be-Safari yi-epaulettes, amabhande. Abasetyhini banxiba ingxowa ngamasimi amancinane.
Ngokukhawuleza xa uva ilizwi leNtshona, ngokukhawuleza phambi kokuba amehlo akho avele imifanekiso yeenkomo zeenkomo. Watshitshisa ijee, iigebengu ezineengqimba ezide, izikhumba zesikhumba, iibhokhwe zeenkomo kunye ne-hat, kunye nenqanaba.
Le ndlela yayithandwayo kwiminyaka engamashumi asixhenxe ekhulwini lokugqibela. Izambatho zifana nezindleko zabafuyi beenkomo kwiindawo zaseMelika. Umxube wezithethe zaseSpain kunye namaNdiya, kunye neendlela zanamhlanje.
Ngokuqinisekileyo oku akuyiyo intambo yaseNdiya kwimo yayo ecocekileyo, kodwa izixhobo zayo zisetyenziswa. Iingubo zeshushu sezulu. Ukuphumla, ehlobo, elwandle. Umbala weengubo ngokuqhelekileyo umhlophe, izinto eziphathekayo yi-cotton.
Isitala seengubo zalesi sihlandlo siphinda umfaniswano wezempi. Imibala ikhethiweyo eluhlaza kunye nayo yonke imibala yomhlaba, ngokuqhelekileyo ikhusela, ihamba imibala.
Akudingeki ukuba ube ngumdlali onxibe le ngubo. Izambatho zentsimbi yamahhala, zixhotywe ngeefolthi ezahlukeneyo, zisebenzise zippers ngokuzenzekelayo. Ngokukhawuleza, ukukhanya, ubuncinane ubuncinane - iimpawu zobuninzi bezemidlalo.
Olu hlobo luhlobo lwemidlalo. Ukukhanya okufanayo kunye ne-dynamism, kodwa umhlobiso ophezulu kakhulu, ukusetyenziswa kweefowuni zegolide kunye nazo zonke iintlobo zeempawu.
Iindidi zezemidlalo. Izambatho zifana neestikiti. Igama linikezelwa kule style ngokuhlonipha inkosi yaseNgesi uDerby. Uthando lwakhe ngumkhonto wobuhlanga.
Le ndlela yokugqoka ibonakala kunye kunye nokufika kokuhamba. Izambatho kwinqanaba elincinci eliluhlaza, i-collars-racks.
Ukususela kuma-1980, le ndlela isesona siqhelekileyo. I-denim yabo igxinwe ngisho nangaphantsi kweengubo. Iintlanzi, iibhasi, ezihlotshiswe ngeentambo, izindebe kunye ne-lurex akukho mangaliso.
Ishishini okanye isixeko
Iinkcukacha eziqinileyo, ukucima izongezo, ukunyanzeliswa kwezentengiselwano, kungabonakali, kungekhona imibala ekhangekayo kwiingubo-oko kukuthi uhlukanisa le ndlela.
Kulo iingubo zokuqhawulwa kwamahhala zibhekisela. Akukho nto inokuthintela ukunyakaza, ukuphazamisa. Iingubo zenzelwe ukuhamba nokuphumla.
Iingubo zalolu hlobo zikwahluke ngobabalo, ukuvuthisa, izinto ezintle, iinkcukacha ezicingayo kunye nezixhobo. Umfanekiso wenziwe udangali, ungabonakali, ungabonakali.
Kuba iingubo zale ndlela zibonakaliswa ngokusetyenziswa kweenkcukacha kunye nezizathu eziphathekayo kwiingubo zesizukulwana sokugqibela.
Le yodwa inxalenye yezitayela. Ndaphendula ngokukhawuleza umbuzo: "Ziziphi iimpahla zokugqoka onayo?" Esi sihloko sinokuphuhliswa ngonaphakade.
Indlela yokugqoka kakuhle ngexesha lebusika
Ukulungelelanisa imibala ekwenzeni nokugqoka
Umntwana wobumnyama: Indlela yokwenza iingubo zevampire ngeHalloween ngezandla zakho
Yintoni enxibayo xa imilenze iphosakele?
Isobho nge-zucchini kunye ne-mint
Izifo kunye neentsholongwane zezityalo zangaphakathi
Inqanaba lobuso lizwe lobumba kunye nenkululeko. Indlela yokuba ngumculi oqaqambileyo owaziwayo?
Indlela yokubopha inqabana entanyeni yakho
Inyaniso eyoyikisayo malunga neepps
Imifanekiso emihle ngeKrisimesi kunye nezibingelelo
Uhambo olude kunye nosana ngemoto
Indlela yokwenza umnqweno womntu?
Izizathu Ezihlanu Zokutya Okungalunganga
"Ukungavumelani" kubangelwa ukuguga kwasekuqaleni
UBawo Frost: oko akufanele kwenzeke emehlweni omntwana
Yintoni endiyenzayo xa ndikhetha insimbi?